नयाँ वर्षको दिन सोच्नै नसकिने गरि घट्यो सुनको मुल्य ! हेर्नुहोस कतिमा हुदैछ कारोबार – Gorkhali Dainik
April 14, 2021 379
काठमाडौँ । सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा १ सयले घटेर ८९ हजार ५ सयमा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि सोमबार छापावाला सुन तोलाको ८९ हजार ६ सयमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला ८९ हजार ५० रहेको छ । त्यसैगरी आज चाँदीको मूल्य तोलामा १५ रुपैयाले घटेर प्रतितोला १२ सय ६० मा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । ** याे समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला **
Prevनवौं महिनापछि १ खर्ब नाघ्यो पुँजीगत खर्च
Nextक्याबिनेटबाट बादललाई आउट गर्दै ओली, नवराज सिलवाल गृहमन्त्री बन्दै !
चालक अनुमतिपत्र…घर बसीबसी लिन चाहनुहुन्छ… ?